साथीहरूसँग घडी 2
के एक सिद्धान्तमा अन्धकारमा विश्वास छ? साथीहरूको एक पार्टी सोधेको थियो धेरै समय अघि।
एक थियोसोफिस्टले सबै तथ्यहरू स्वीकार गर्दछ, र कहिल्यै आफ्नो तर्क गुमाउँदैन। तर एक Theosophist रोक्दैन र तथ्यको साथ सामग्री आराम गर्दैन; उसले यसको उत्पत्तिमा यसलाई पत्ता लगाउन र यसको नतीजा हेर्न प्रयास गर्दछ। अन्धविश्वास हो विश्वास वा केहि चीजको अभ्यास वास्तवमा किन थाहा छैन भनेर। फराकिलो प्रकाशमा, अन्धविश्वास भनेको कुनै विश्वासको लागि अन्य कारण बिना कुनै अभ्यासको बारेमा एक वृत्ति वा प्रवृत्तिमा मनको सहमति हो। मानिसहरुको अन्धविश्वासहरु भुलाएको ज्ञानको मधुरो प्रतिबिम्ब हो। ज्ञान गयो, र जससँग ज्ञान थियो, मानिसहरू फारामको अभ्यास जारी राख्छन्; र त्यसकारण फार्महरू र विश्वासहरू परम्परादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिन्छ। जब तिनीहरू ज्ञानबाट टाढा हट्छन् तिनीहरू अन्धविश्वासको नजिकै पसे र कट्टरपन्थी पनि हुन सक्छन्। ज्ञान बिना अभ्यास अन्धविश्वास हो। आइतवार बिहान एउटा ठूलो शहरमा चर्चहरू भ्रमण गर्नुहोस्। उपासनाको औपचारिकता हेर्नुहोस्; नृत्यकर्मीहरूको जुलूस हेर्नुहोस्; सेवा सञ्चालन गर्नेहरूको कार्यालयको चिह्न नोट गर्नुहोस्; मूर्तिहरू, पवित्र आभूषणहरू, उपकरणहरू, र प्रतीकहरूको अवलोकन गर्नुहोस्; के पुनरावृत्ति र पूजा को सूत्र सुन्न — के? के हामी एक अपरिचितलाई यी सबैलाई अन्धविश्वास भन्छौं र हामी अन्धविश्वासी व्यक्ति हौं भनेर दोष दिन सक्छौं? त्यसकारण हामी अरूको विश्वासलाई ध्यान दिन चाहन्छौं जुन हाम्रो मानिसहरु भन्दा कम अन्धविश्वासी हो। अन्धविश्वासहरू जसलाई हामी "अज्ञानी" र "विश्वसनिय" भन्ने गर्छौं, त्यसको उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ। जसले जान्ने छन् उनीहरूले आफ्नो उत्पत्तिमा परम्परा वा अन्धविश्वास पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तिनीहरूले यो गरे भने उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् जुन यसको निर्बुद्धि प्रतिबिम्बको विपरीत हो is अन्धविश्वास। आफ्नै अन्धविश्वासको एक अभूतपूर्व अध्ययनले आफ्नो व्यक्तिको एक अज्ञात अज्ञानता प्रकट गर्दछ। अध्ययन जारी राख्नुहोस् र यो आत्म को ज्ञान को नेतृत्व गर्नेछ।
अन्धविश्वासको आधार के हो जुन एक "caul" को साथ जन्मेको केही मानसिक संकाय वा तन्त्रमन्त्र अधिकार गर्न सक्छ?
यो विश्वास प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्वमा आयो, जब मानवताले पृथ्वी र वरपरका प्राणीहरूसँग सम्भोग गर्‍यो। तब मानिसको दृश्य, श्रवणशक्ति र अन्य भित्री मनस्थिति इन्द्रियहरू अधिक संवेदनशील र भौतिक जीवनमा बढेर बादलमा परिणत भए। मानव शरीरको कुनै भाग छैन जुन प्रकृतिको एक वा बढी अदृश्य संसारमा केही शक्ति र शक्तिसँग सम्बन्धित छैन। त्यो जसलाई "caul" भनिन्छ सूक्ष्म संसारसँग सम्बन्धित छ। यदि, जब मानिस यस भौतिक संसारमा जन्मन्छ, caul उहाँसँगै रहन्छ यसले स्ट्याम्पल गर्दछ वा सूक्ष्म शरीरलाई निश्चित प्रवृत्तिले प्रभावित गर्दछ र यसलाई सूक्ष्म संसारमा आकर्षित गर्दछ। पछिल्लो जीवनमा यी प्रवृत्तिहरूलाई हटाउन सकिन्छ, तर पूर्ण रूपमा कहिले पनि प्रभावशाली हुँदैन किनभने लि sha्गा शरीरा, सूक्ष्म डिजाइन निकाय, सूक्ष्म प्रकाशबाट प्रभावहरू प्राप्त गर्न सजिलैसँग मिल्दछ। समुद्री सतह पुरुषहरूले यस अवशेषमा संलग्न हुने अन्धविश्वास, यसलाई "राम्रो भाग्य" को शगुन वा डुब्ने बिरुवामा संरक्षकको रूपमा, यो तथ्यमा आधारित छ कि यो भ्रूणलाई पूर्वजन्ममा प्रतिकूल तत्त्वहरूबाट सुरक्षा थियो। विश्व, यसैले अब यो भौतिक संसारमा पानीको खतराहरूबाट जोगिन सक्छ जुन सूक्ष्म प्रकाशसँग मिल्दोजुल्दो छ र त्यस्ता तत्वहरूलाई, जसलाई भौतिक भनिन्छ, कुनै पनि कम तन्त्रमन्त्र होइन र यो सूक्ष्म संसारमा उत्पत्ति हुन्छ।
यदि एक विचार अर्कोको मनमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, किन यो सही रूपमा र के रूप मा धेरै खुफिया संग साधारण कुराकानी गरिन्छ?
यो गरिएको छैन किनकि हामी सोच्न "कुरा" गर्दैनौं; न त हामीले अझै सोच्ने भाषा सिकेका छौं। तर अझै, हाम्रो विचारहरू हामीले सोचेको भन्दा धेरै पटक अरूको दिमागमा स्थानान्तरण हुन्छन्, यद्यपि यो कुराकानीको रूपमा बुद्धिमानीपूर्वक गरिएको छैन किनकि हामी विचारको माध्यमबाट मात्र एक अर्कासँग कुराकानी गर्न आवश्यक बाध्य भएका छैनौं, र किनभने हामी दिमाग र इन्द्रियलाई शिक्षित गर्न समस्या लिने छैन। संस्कृत मानिसहरु बीच जन्मेको एक बच्चाको हेरचाह, प्रशिक्षण, अनुशासित र अभिभावकको तरीका वा ऊ जन्मिएको सर्कलमा शिक्षित हुन्छ। सोच्न मात्र रोक्नुहोस्, र यो एकैचोटि देखिने छ कि शिक्षकको पक्षमा लामो समयसम्म धैर्यता र विद्यार्थीको तर्फबाट निरन्तर प्रयास गर्नु आवश्यक छ, भाषा बोल्ने र पढ्ने र लेख्ने कला सिक्न, र सिक्नको लागि बानी, चलन र भाषा को लागी विचार को तरीका। यदि यस भाषालाई एक भाषा सिक्नको लागि यस्तै प्रयास र प्रशिक्षण आवश्यक छ भने, यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि केही व्यक्तिहरूले शब्दहरूको प्रयोग बिना नै विचारहरू सही रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्षम छन्। यो शब्दहरूको प्रयोग बिना विचार स्थानान्तरण भन्दा यो शब्दहरु बिना विचार स्थानान्तरण गर्न को लागी अधिक जादू हो। भिन्नता यो हो कि हामीले यो कुराकानीको संसारमा कसरी गर्ने भनेर सिक्यौं, तर अझै सोचाइको संसारमा आवाजविहीन बच्चाहरू जत्तिकै अनभिज्ञ रहन्छौं। शब्दद्वारा विचारको स्थानान्तरण गर्न दुई कारकहरू आवश्यक हुन्छ: एक जसले बोल्छ, र जसले सुन्छ; प्रसारण परिणाम हो। यो हामी जान्दछौं कसरी गर्ने, तर वास्तविक तरिका जसमा हामी बोल्छौं र बुझ्छौं हाम्रो लागि जादुगरी जस्तो छ शब्द बिना सोचको स्थानान्तरण। हामीलाई थाहा छैन शरीरमा विभिन्न अंगहरू कसरी र कुन तरिकामा ध्वनि उत्पादन गर्न क्रमशः सञ्चालन हुन्छन्; हामीलाई थाहा छैन कुन आवाजले उच्चारण गरिएको आवाज अन्तरिक्ष मार्फत प्रसारित हुन्छ; हामीलाई थाहा छैन tympanum र श्रवण तंत्रिका द्वारा ध्वनी कसरी प्राप्त भयो; न त कुन प्रक्रियाबाट आवाजमा व्यक्त गरिएको बिचारलाई बुझ्ने मानिस भित्रको बौद्धिक क्षमताको अर्थ हुन्छ। तर हामी जान्दछौं कि यो सबै भइसक्यो, र हामी एकअर्कालाई केहि यस्तो फेसन पछि बुझ्छौं।
के हामी केहि विचार सोचेको ट्रान्जिट प्रक्रियाको अनुरूप छ?
हो टेलिग्राफिक र फोटोग्राफिक प्रक्रियाहरू सोचाइ ट्रान्सफरसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यहाँ अपरेटर हुनु पर्छ जसले आफ्नो सन्देश प्रसारित गर्दछ, त्यहाँ रिसीभर हुनु पर्छ जसले यसलाई बुझ्दछ। त्यसोभए त्यहाँ दुई व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ जो अनुशासित, प्रशिक्षित वा शिक्षित वा एक अर्काको विचारहरू प्राप्त गर्न को लागी हो यदि तिनीहरू त्यस्तो बुद्धिमानीसाथ गर्न चाहन्छन् र समान शुद्धताका साथ सामान्य बौद्धिक कुराकानी भइरहेको हुन्छ, जसरी दुई व्यक्तिले बोल्न सक्षम हुनुपर्दछ उनि समान भाषा यदि तिनीहरू कुराकानी गर्ने थियो। यो भनिन्छ कि धेरै व्यक्तिहरू यो गर्न सक्षम छन्, तर तिनीहरू यसलाई केवल धेरै मूर्खतापूर्ण तरीकाले गर्छन्, किनकि उनीहरू मनलाई प्रशिक्षणको कठोर मार्गमा पेश गर्न इच्छुक छैनन्। दिमागको यो प्रशिक्षण जत्तिकै व्यवस्थित हुनुपर्दछ, र धेरै सावधानीका साथ सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जस्तो स्कुलमा विद्वानको जीवन छ।
हामी कसरी बुद्धिमानीसाथ कुराकानी गर्न सक्छौं?
यदि कसैले आफैंको सोचविचार र अरुको दिमाग ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्दछ भने उसले थाहा पाउनेछ कि उसको विचारहरु कुनै रहस्यमय प्रक्रियाबाट अरुहरुमा पोखाउँछन्। शब्दहरूको प्रयोग बिना नै विचार गरेर कुराकानी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो दिमागको कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्दछ। जब दिमागका कार्यहरू नियन्त्रित हुन्छन्, र दिमागले कुनै पनि विषयमा स्थिरता लिनको लागि सक्षम हुन्छ, तब यो ज्ञात हुनेछ कि दिमागले फारम खडा गर्छ, विषयको आकार र चरित्र लिन्छ जुन विचाराधीन छ, र एक पटक यस विषयलाई बताउँदछ वा वस्तुलाई सोच्दछ जहाँ यो निर्देशित छ, त्यहाँ इच्छुक भएर। यदि यो राम्रोसँग गरिएको छ भने, जो व्यक्ति सोच्न निर्देशित छ, निश्चित रूपमा यसलाई प्राप्त गर्दछ। यदि यो राम्रोसँग गरिएको छैन भने त्यहाँ ईन्डिस्टिन्क्ट इम्प्रेशनको उद्देश्य के हो भनेर हुन्छ। विचारहरू पढ्न वा जान्ने क्रममा, दिमागका कार्यहरू पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ यदि अर्कोको सोच प्राप्त गर्न र बुझ्ने हो भने। यो समान तरिकाले गरिन्छ जसमा सामान्य बुद्धिमान व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको कुरा सुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नको लागि ध्यान दिएका शब्दहरू सुन्न आवश्यक छ। ध्यान दिएर सुन्न दिमागलाई यथासम्भव समात्नुहोस्। यदि श्रोताको मनमा अप्रासंगिक विचारहरू प्रवेश गरेमा आवश्यक ध्यान दिइएन, र शब्दहरू, सुने पनि, बुझिएन। यदि कसैले अर्कोको विचार पढ्छ भने उसको दिमाग ध्यान दिएर खाली स्थानमा राख्नुपर्दछ ताकि प्रसारित बिचारको छाप स्पष्ट र स्पष्ट रूपमा सुरक्षित गर्न सकियोस्। त्यसोभए यदि त्यो सोच स्पष्ट र फरक छ भने यसलाई कुनै पनि कठिनाई हुनेछैन जुनसुकै यसलाई बुझेर। हामी यस प्रकारले देख्छौं कि विचारको ट्रान्समिटरको दिमाग र विचार प्राप्त गर्नेको दिमाग दुबै अभ्यास गर्न तालिम दिनै पर्दछ, यदि विचार स्थानान्तरण सही र बुद्धिमानीपूर्वक सञ्चालन गर्नु पर्छ भने।
के अरूको विचारहरू पढ्ने अधिकार छ कि उनीहरूलाई हामीले गर्नु पर्छ वा होइन?
पक्कै छैन। यो गर्न को लागी unpononable और बेइमान छ यो अर्को को अध्ययन मा प्रवेश र ransack र आफ्नो निजी कागजात पढ्न छ। जब कुनै एक विचार बाहिर पठाउँदछ यो प्रेषकको व्यक्तित्वको साथ मोहरिन्छ र एक प्रभाव वा हस्ताक्षर दिन्छ। यदि सोचाई यस्तो प्रकृतिमा छ कि प्रेषकले यसलाई चिन्न चाहँदैन, प्रेषकको प्रभाव वा हस्ताक्षरले यसलाई धेरै मिल्छ जस्तो हामीले एउटा खालको खाकालाई "निजी" वा "व्यक्तिगत" चिन्ह लगाउँदछ। यो कारण यो अदृश्य हो यो बेइमान मध्यस्थकर्तालाई जब विचार यसको गठन मा ढीला र मध्यस्थता संग सम्बन्धित छैन। सही जादूगर द्वारा, यस्तो विचार पढ्न वा हस्तक्षेप हुँदैन। यदि यो अवरोध नभएको भए त सबै जादूगर शक्तिहरूका शिक्षकहरू रातभरि करोडपति बन्न सक्थे, र हुनसक्छ, तिनीहरूले हरेक पाठ वा सिटमा धेरै पैसा कमाउने आवश्यकतालाई हटाउँदछन्। उनीहरूले शेयर बजारलाई दु: खित तुल्याउने थिए, विश्वको बजारसँग टुनामुना ट्रस्ट बनाउने थिए, त्यसपछि एक अर्कालाई आक्रमण गर्ने र समयको अन्त्य हुने थिए, जस्तै "किल्कन्ने बिरालाहरू"।